Stock Footage uye Vhidhiyo Mhedzisiro Resource Sites
B-roll, stock stockage, midhiya enhau, mimhanzi, mavhidhiyo ekumashure, shanduko, machati, 3D machati, 3D mavhidhiyo, vhidhiyo infographic matemplate, kurira mhedzisiro, vhidhiyo mhedzisiro, uye kunyangwe yakazara vhidhiyo matemplate evhidhiyo yako inotevera anogona kutengwa online. Sezvo iwe urikutarisa kugadzirisa yako vhidhiyo kuvandudza, aya mapakeji anogona kunyatso kumhanyisa yako vhidhiyo kugadzirwa uye kuita ako mavhidhiyo kutaridzika zvakanyanya kuve nyanzvi mune chidimbu cheiyo nguva.
Kana iwe uine hunyanzvi tech savvy, iwe ungatoshuvira kukwira mukutenga mamwe mavhidhiyo. Mimwe yemifananidzo, semuenzaniso, inouya nemirairo inoshamisa yekuti ungagadzirisa sei vhidhiyo, kutsiva, marogo, shandura zvinyorwa, nezvimwe pasina kuve wizard yehupenyu.
Heino muenzaniso wakanaka. Tarisa uone izvi Whiteboard Pack kubva kuVideohive - unogona kushandisa ese akasiyana pre-akagadziriswa maficha kuti uise pamwechete rako rako rinotsanangudza vhidhiyo!
Kana iwe ungangoda kuburitsa yakanaka vhidhiyo muKutevera Mhedzisiro nezve yako nyowani iPhone application. Ingotenga iyo iPhone Catalog kubva kuBlueFX uye enda!
Kune akati wandei masaiti iwe aunogona kushandisa izvo zvinozotsvaga pamusoro makumi mashanu emasheya masaiti masaiti kwese paInternet. Buda Footage.net.
Stock Vhidhiyo Masaiti Sites
Heino runyorwa rwezvakakura zviwanikwa zvekutsvaga zvemadzishe-emahara emavhidhiyo mavhidhiyo epurojekiti yako inotevera. Saiti ini yandinonyanya kushandisa nekuda kweayo akasiyana siyana uye yakaderera mutengo iri Depositphotos. Kana iwe ukatsvaga nevhidhiyo mundima yekutsvaga, mhedzisiro ichave vhidhiyo. Kana, iwe unogona kusarudza vhidhiyo kubva pakutsvaga kwavo kudonhedza.
123RF - HD stock mavhidhiyo uye mavhidhiyo
Adobe Stock - Unza mazano ako akanakisa kuupenyu nezvakanakisa muzvitoro.
Zera Fotostock - emahara emahara uye akachengetedzwa kodzero mavhidhiyo.
Alamy - Vanopfuura mamirioni makumi mashanu nemashanu emhando yepamusoro ezvipfuyo mifananidzo, maveji uye mavhidhiyo
Clipcanvas.com - Imwe-nguva rezinesi mubhadharo, kushandiswa kusingaperi, pasirese, chero midhiya, chero Fomati, kudhanilodha kwakawanda
Corbis Motion - yemhando yepamusoro yekugadzira uye yekunyora zvemukati izvo zvinowedzeredzwa nguva dzose
Depositphotos - Anotsigira we Martech Zone!
DigitalJuice - vhidhiyo mhedzisiro uye mavhidhiyo anotora.
Dissolve - HD vhidhiyo yemunoona anoona nyaya
iStockphoto - Tsvaga vhidhiyo yemasheya
MotionElements - Asia-Akafuridzirwa stock stock uye maficha
Vadivelu Comedy MovieTools - emahara emahara animated 2D uye 3D kumashure mifananidzo, yakaderera yechitatu uye zvimwe
Plixs - tsvaga zviuru zvemhando yepamusoro yemahara mifananidzo uye mavhidhiyo mavhidhiyo ane CC0 marezinesi.
Pond5 - stock stock media pamusika
Revostock - inokwanisika stock vhidhiyo vhidhiyo, mushure memhedzisiro mapurojekiti, mumhanzi uye kurira mhedzisiro
Shutterstock - emahara emahosi emasheya
Mifananidzo - mhando yepamusoro yemavhidhiyo emavhidhiyo ane marezinesi emahara uye marezinesi akachengetedzwa nekodzero. Ultra HD vhidhiyo inowanikwa kurodha mu1080p.
NhauBlocks - kunyoreswa-kwakavakirwa sosi yekurodha emadzishe-emahara stock mavhidhiyo, mafambiro kumashure, Mushure meMhedzisiro matemplate nezvimwe
Vhidhiyo - emahara emahara mavhidhiyo mafaera
Vimeo - Inoshamisa, yemahara-yemahara stock vhidhiyo, yakasarudzwa naVimeo vapepeti.
YayImage Mavhidhiyo - Pamusoro pe250,000 HD uye 4K vhidhiyo vhidhiyo ayo ari mutengo unodhura.
Uye kana iwe uchida mamwe echinyakare mavhidhiyo, tarisa iyo Internet Movie Archives!
Ongorora: Tine vamwe vanobatana zvinongedzo mune ino posvo!
Tags: 123RFkupiswaadobe stockpashure pemigumisiromushure memhedzisiro matemplateZera Fotostockalamychero Fomatichero midhiyab-rollBBC Motion GararibhuruuClipcanvasCorbis MotionDigitalJuiceDissolvefootagekutsvaga kwevhidhiyoFramepoolyemahara stock mavhidhiyokuwanaiMovieInternet Movie ArchivesistockphotoKushambadzira Vhidhiyomafambiro ekufambamafambiro ezvinhuVadivelu Comedy MovieToolskudhanilodha kwakawandaImwe-nguva rezinesi muripochisingaperi UsePond5Revostockkodzeromadzimambo akasunungukaShutterstockstock animationMifananidzostock vhidhiyostock vhidhiyo vhidhiyonyaya dzinovharirakuchinjaVhidhiyo Zvidimbuvhidhiyo mhedzisirovhidhiyo vhidhiyovhidhiyo shandukoVhidhiyovimeo stockchena bhodhiPasi rose
Ongororo Mhedzisiro: Vashambadzi Vari Kupindura Sei Kune Denda uye Kukiyiwa?
Jan 9, 2014 na12:02 PM
Ndatenda nekutaura, Douglas! Zvakaongwa zvikuru.
Aug 18, 2014 na11:20 PM
Kutenda nekubatanidza MotionElements yeiyi inopedza rondedzero yemakuru Stock Media Marketplaces.
Ita shuwa yekushanyira uye kuyedza iyo itsva uye yakakunakira VisualSearch kuti uwane zvirimo nekukasira.